गफ ! .....: April 2012
नेपाली गजल डटकमको बाह्रौं अंकमा सम्पादक नारायण गाउँलेको सम्पादकीय, जो 'मकता' मा केन्द्रित छ, पढिरहँदा मलाई आफुले गजलमा तखल्लुस(चिनो) राख्ने गरेको सम्झना आइरहेथ्यो ।
"....नेपाली गजलमा तखल्लुसको प्रयोगले खासै सघन उपस्थिति कायमा गर्न नसकेको सन्दर्भमा तखल्लुस भएका वा नभएका दुबै समापक शेरलाई 'मकता'का रुपमा लिने गरिएको छ ।...." हो यहि वाक्य पढिरहँदा म सोचिरहेथें, मैले तखल्लुसलाई कतिको जोड दिएको छु आफ्नो गजल लेखनमा? त्यसो त आफ्नो ब्लगहरुमा मैले तखल्लुस प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु पाएको पनि सम्झना छ । कतिले आफ्नो नामलाई तखल्लुसमा गजब प्रयोग गर्ने भनेका छन् त कतिले तखल्लुसको अचाक्ली प्रयोग भयो पनि भनेका छन् । हुनपनि जे जति तखल्लुस मैले प्रयोग गरेको छु मेरा गजलहरुमा त्यो आफ्नो नाम 'दीपक' हुनुकै फाइदा उठाएको हुनसक्छु मैले ।
यि नै कुराहरु सम्झिरहँदा मलाई यहि कुरामा आफ्नो ब्लगमा यौटा पोष्ट लेख्ने विचार उब्जिरहेथ्यो मनमा । र त्यसैलाई विचारमा मात्र सिमित नराखेर ब्लगको लागी यो पोष्ट बनाएको हुँ । यस्लाई फेसबुकको नोटमा पनि सेयर गर्ने हिसाब समेत रहेकोले दुबैतर्फ राखेको छु । मैले आफुले भेटेसम्म कम्प्युटरका कुनाकानीबाट तथा आफ्नो ब्लगबाट तखल्लुस प्रयोग गरिएका शेरहरु मात्र भेला गरेर यस पोष्ट/नोटमा राखेको छु ।
यसलाई शिर्षक दिँदा पहिले 'मकतामा म' लेखेको भएपनि पछि 'तखल्लुसमा दीपक जडित' लेखेको छु त्यो यसकारण कि मैले गजलमा तखल्लुस राख्दा केवल मकता/समापक शेरमा मात्रै राखेको छैन ।
भन्लान दीपक बल्दैछ आज ।
नगद् भै हात्हातै चल्दैछ आज ।
(मतला शेरमा ।)
मनमा दीपक निभाएछन् आज ।
हरेस सबैले नै खाएछन् आज ।
भन्न चाहन्छु म बालेछन् दीपक,
चन्द्रमा पनि त उदाएछन् आज ।
(मतला र मक्ता दुबै शेरमा चिनो राखिएको।)
नबलेपछी गरिबलाई दीपक,
अँध्यारै बरु ठिक छ नि का हुन्छन ।
नसुना सबैलाई आफ्नो सम्झी कथा,
दीपक तँ विरानो आज पिरतीमा ।
तिमीले नै नजलाउँदा अस्तित्वमै कहाँ हुँला,
निभेपनि आफुलाई आफैं दीपक भनेको छु ।
त्यसो त पुकारिन्छु दीपक,
खप्नु छँदैछ अँध्यारो मैले ।
कोहि उभिन्छन् दीपक बाल्दै अँध्यारो धर्तीमा,
छाडेर धरती आकाश माथि उभिन्छन् कोहि ।
प्रहार लगातार देख्दा यहि लाग्छ तिमी,
दीपक सँधै आँसु पुछोस भन्ने चाहन्छौ ।
चल्यो मनमौजी दीपक सदा,
अहँ त्रास भएन जिन्दगीमा ।
नाममै आगो बोकेको छस् जलाउनु केहि छ भने,
गा' है दीपक तँ सुकेको खर परालको महिमा ।
सुनें फिर्छ रे जडित अब त घर ,
त्यहि नै सबैको ठुलो आश भो ।
सम्हाल्नु थियो धेरै तैंले ए जडित,
तेरै हररात भट्टीको बास भो ।
(अन्त्यका दुई शेरहरुमा चिनो(तखल्लुस्) राखिएको ।)
कि फुक्नेछौ श्वासले कि हातैले छुनेछौ,
आँखीर दीपक हुँ के डर निभ्नु मलाई ।
तिनै मध्ये दीपक एक हो, जो-
आफैंलाई विर्षन्छन् झनै धेरै ।
दीपक अरुनै होला जो बल्न सक्छ,
म मात्र गजलको तखल्लुस रहेछु ।
भाँचियो कसरी करक्क र जोडियो फेरि कसरी,
जडित बबुरो! तँ भै'गो नगर दिलका कुराहरु ।
बिउँझिएर रातबिच एक्लो दीपक देख्दा ,
धर्म हो वा नियति उस्को जल्छ बस् जल्दछ दीपक,
आफ्नो रंग नै नभएपछि श्यामल के धवल के?
हराएथ्यो कतै भीडमा खोजेन कसैले,
हेर आयो दीपक भन्ने मनुवा फेरि आयो ।
बल्दिंन; तर खोजी दीपककै भए,
चक्मक र झुलोमा खोज्नु मलाई ।
मुखै फोर्यो उसले, 'खै त शेर ए जडित?'
देखाएँ, रद्दी हाल्ने स-सानो बोरा पनि छ ।
जा जा जलनमा पछुतो नगर तँ
जल्दै नजलि कोहि दीपक हुँदैन ।
व्यर्थ छ भन्छौ भने उज्यालोमा दीपक जलाउनु,
जो तेज म भित्र छ ऐले माचिसमै रहन देउ ।
मुद्दा मैले उठाएथें विमति मसँग थियो,
दीपक लेखि काटेर यो सिवायमा मिलौं भन्यौ ।
होसियार बसुन् दीपक बाल्नेहरु,
हावाको झोँकामा पर्नु हो जिन्दगानी ।
'खबर्दार! ए दिपक तैंले दोष उन्को मात्रै देख्लास्' ,
केलाई कुलाई आफैंलाई आफैंले नै झाँटी राखेँ ।
तित्रा जुनि भोग्नु पर्छ दीपक तेरो मुखै वैरी,
पग्लिएर तप्प चुहिन्छु आँखाबाट,
दीपक हुँ रे त्यसैले रुन सक्दिँन म ।
दिनभरि नै शिकारमा हुन्छ जडित,
साँझमा एउटा शेर लिएर आउँछ ।
दीपक न हो भनेर आगो लगायौ म मा,
अचम्म तर धुवाँ तिमीले साझा निकाल्यौ ।
दियालो चैं के थियो खै बुझ्नै सकिएन,
बलिर'को दीपक म छु तेल त तिमी छौ ।
यो बिकाउ दुनियाँमा दीपक नि छ लिलामीमा,
खरिददारी गर्नेहरु आएर लाउ मोल यहाँ ।
समयलाई मुठ्ठीभित्र राख्न खोज्ने दीपक आज,
दुनिँयासँग हारेर सँधै तल पर्ने हात भएं ।
समय नै उल्टो भए दीपकको भन्नु केही छैन,
तर तल गिर्नेले नै शिखर छुँदो रै'छ हजुर ।
हिमालझैं ललाट चुम्यो जब तिम्रो,
दीपकको त सपना साकार भयो ।
आँधी हुरी वैरिएर पानीझरी परे पनि,
आशाको दीपक जला'को भएर यस्तो भएं ।
पग्लिएर तप्प तप्प तिम्रै मायामा म चुहिरहें,
किन टाल्थ्यौ दीपकको मुटु चुहाउ कति चुहाउंछौ ?
दीपकले फाट्नुपर्ने कारण बुझ्दा,
उल्टै उस्को मगज नै चाटेर गए ।
कहाँबाट आयो जडित बाठो भन्नुहोला,
मनुवा प्राणी दीपक पनि ठान्दछ सब बराबरी,
गोप्य सम्झौता लेखेर आँखिर,
सुवर्ण जडित खाम चढाए ।
एक्लो यस्तरी भईछस् ए! दीपक तँ त सडक जस्तै,
त्यहीं टेकीहिंड्ने यहाँ अनेकौं सुहागका हुल छन ।
तिम्रा मनको दीपक आँखिर बालिदियौं हाम्ले,
भन्नलाई ह्रदयमा दीपक बाली,
चन्द्रै किन छुनुपर्यो हाँस्न सकुँ भुईँमै तर,
चाहंदैन दीपक फेरि भाग्य उसकै खोटो होस् ।
दुरी भुगोलको टाढा हुँदा नि गजलले आएर छोई,
आँखिर पियारी दीपकलाई घोप्ट्याई 'पएर'मा रुवायौ ।
एक्लिएर दीपक पग्लिँदा तापमा,
शितल तिम्रो प्रेमको सिँयाल आयो ।
भन्दैथिए जलाउंछौं शान्तीको दीपक घरघर सर्बत्र,
सल्काएर राँको निर्धा झोपडी ति आगोमा अँचिटे ठुलाले ।
जोडेर आफैंले दिएथें दीपकलाई जडित,
अर्थ्याईएको देखेर राख न साटको भईयो ।
फूल रुँदा दुखिदिने यै दीपकको नजरले,
हेर्दै लाँदा संसार यो आधासरै भोको देखेँ ।
छाडेथें अन्तिम चिठ्ठी लेखेर दीपक 'जडित' भई,
हल्ला मचाई भनेछन सबैले जात फालेर गयो ।
जिन्दगीले तैंलाई बनायो खसी के ढाल्थिस् ए दीपक?
ढाल्छस् नै भने तँ भित्रको राक्षस लडा, दशैं आयो ।
न त बोलीचाली एकै न त ल्वाईख्वाई एकै,
दीपक समावेशी हुँदै रम्झम् बनाउँ भन्छन् ।
जलाएर मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ र दीपक मनमा,
छरेर उज्यालो त्यो दीपक सुखदायक हुन नसक्दा ।
ऐया! कहाँ भन्न सक्छ टोकेर आफैंलाई दीपकले ,
पिईरहेछ आफ्नै रगत बनेर डाँस जिन्दगीमा ।
उठ् दीपक अब त यो जिन्दगीमा अलिमाथी,
दिनमा मात्र हुन्छ सूर्य अँध्यारो छ रात सारा,
मेरो साथ चाहिएमा दिलको दीपक बालीहेर ।
(यहाँ भए मध्येमा सबैभन्दा पुरानो शेर ।)
र अन्त्यमा यो पाँचवटै शेरहरुमा चिनो(तखल्लुस्) राखिएको गजल ।
आफैं जल्दैछ जल्न जाने पुतली भएन दीपक ।
फूल्ने, क्षणमै वैलिने फूल अलि भएन दीपक ।
फेरियो निश्चय पनि बदलेर नयाँ समयले,
मान्यता केहि अटल; पूर्ण कलि भएन दीपक ।
तेलै जीवनको सक्ला बरु जलेर नै यसैगरी,
निचोरेर हातैले मुटु बलि भएन दीपक ।
भएर पार्वती आजकी गुहारेथ्यौ त्रासले तर,
विष्णु जस्तै योगि स्वरुपमा छलि भएन दीपक ।
हो जलेको छ अझै जलिनै रहेको छ निरन्तर,
अफसोस् जलिरहे पनि झल्झली भएन दीपक ।
Posted by दीपक जडित at 7:59 PM2comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 7:58 PM 1 comment: Links to this post
नजान्दा हिंड्न हो
भर्खर जान्दा हिंड्न
कैली गाईको दुधे बाछो
कुनै बुढो मान्छेको
आफ्ना भर्खर भर्खर तङ्रिएका
खुट्टाहरु लर्बराउँदै ।
घोक्रो थर्काउँदै गर्ने
फाँ फाँ र फूँ फूँ गाली
गोठ भन्दा परसम्म
क्षणमै नाघ्छ बड्किंदै
गोठ छेउको ठुलो गह्रा
आँतर आँतर घुमेर
सियो सियो छिचोलेर
उसको बाबु समान
एक बिहान पुरा लाग्छ ।
बाछोको यो उपद्रो देखेर
सोच्दो हो पुँडे
कि अब उसलाई
त्यसरी बड्किएर बुर्कुशी मार्ने
छुट कहिल्यै हुने छैन
उ मात्र हेरिरहन्छ
सोच्दी हो कैली
कि उसको छोरा अब
फर्केर आउने छैन फेरि
आफ्नो फाँचोभरि पग्रिएको दुध चुस्न
कैली छिनाउँलाझैं गर्छे
आफ्नो गलाको दोहोरो दाम्लो
उ उखेल्न पनि सक्छे
बल गरेर आफु बाँधिएको दुबै किला ।
दुधे बाछोलाई जुका पर्न सक्छ
उस्लाई के थाहा
उ जुका परेर मर्न सक्छ ।
चिन्तित गोठ मालिक
एक गर्जनमा भेला गर्छ
परिवारका एक एक सदस्य
र आज्ञा दिन्छ
बाछो समातेर थलोमा ल्याउन ।
दिदी, दाजु, म र मेरी बैनि लगायतले
म उम्किन दिन्छु उसलाई
र तयार हुन्छु गोठ मालिकको गाली सुन्न
उ बड्किएर अझ पर पुग्छ
र मैले गाली सुन्न भ्याईसक्दा
फर्कन्छ गोठमा आफ्नी आमासँग ।
आहा! कति मीठो, कति प्यारो
अचानक उर्लेको यो याद ।
Posted by दीपक जडित at 6:03 AM 1 comment: Links to this post